Ganacsiga Soomaalida oo toos ugu xirmay Dekadaha Turkiga iyo Jabuuti (Ku-tiirsanaantii Imaaraadka oo dhammaatay) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Ganacsiga Soomaalida oo toos ugu xirmay Dekadaha Turkiga iyo Jabuuti (Ku-tiirsanaantii Imaaraadka oo dhammaatay) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waxaa Dekadda magaalada Muqdisho ka shaqo bilaabay Markabkii Ganacsi ee ugu horeeyay oo laga leeyahay dalka Jabuuti, kaasoo isku xiri doona ganacsiga Soomaaliya iyo Turkiga.
Munaasabad lagu daah-furay Khadka cusub ee isku xiraya Somalia iyo Turkiga, soona maraya Jabuuti ayaa waxaa ka qeyb galay madax ka tirsan Dowladda Soomaaliya iyo Ganacsatada Muqdisho. Markabka African Sun ee Jabuuti ayaa 2-dii bishan badeecad kasoo qaaday magaalada Istanbul, wuxuuna ku hakaday Jabuuti, kadibna wuxuu 14 maalmood kadib ksoo xirtay Muqdisho, isagoo u gudbi doona dekadda Kimaayo, inta uusna ku laaban Boosaaso iyo Jabuuti.
Maraakiibta soo mara Dekadaha Imaaraadka Carabta ayey ku qaadan jirtay inay in ka badan 40 maalmood inay ku yimaadaan Dekada Muqdisho, waxaana tallaabadan algu tilmaamay mid looga xoroobayo Ganacsigii Soomaalida ee ku xirnaa Imaaraadka Carabta, iyado wixii hada ka dambeeya dekadaha Soomaaliya ay si toos ula gacansan doonaan Dekadaha Turkiga iyo Jabuuti.
Sii-haya Wasiirka Maaliyadda C/raxmaan Ducale Beyle ayaa sheegay in tallaabadan ay muujineyso sida Ganacsiga dalka usii kordhayo, iyadoo horumar weyn sameynayaan ganacsatada dalka.
Previous articleMahdi Guuleed oo magacaabay Guddi xil wareejin, iyadoo Ra’iisal wasaaraha cusub aanu kalsooni helin
Next articleSaddexda Mas’uul ee saameynta ugu xun uu ku reebay Heshiiskii Doorashada 2020/2021 (Akhriso)